Kuzala yepulazi lasezindlini izilwane, ezifuywa abantu emakhulwini amaningi eminyaka adlule, ukuthola ukubaluleka kwabo zokugcina yokuzalanisa kwasekuqaleni ngenxa izici zabo esiyingqayizivele isici. Abaningi izwi ajwayelekile esisetshenziswe ngokuqondene naleli igama elithi "idwala" - Ingaphandle. Kuyini lokhu izwi futhi nendlela okusebenza ngayo ikhono ukulondoloza izici izilwane zohlobo olufanayo amakhulu eminyaka?
Umqondo umthethosisekelo isilwane
Enye ayizinkulungwane 2 edlule, abantu wokuqala waqala ukuba banake umthethosisekelo izilwane. Ihlanganisa anhlobonhlobo izici zomzimba, emzimbeni wakhe, uhlamvu ziphethe yokusabela kuya imvelo bangaphandle ufuzo.
Kuyinto ne okwashiwo izici zangaphandle komzimba wesilwane bese liqala ukuphenywa kokuphulwa sisekelo wayo. amafomu kwangaphandle ukuba, uhlobene eduze izikhwepha zayo kanye Inani emnothweni, ziyisisekelo "Ingaphandle" umqondo. Kuyini lokhu? Funda mayelana kuwo.
Yigama ongaziwa - Ingaphandle
isilwane yangaphandle kufana ikhadi lebhizinisi, lapho ungathola izinkomba indlela zohlobo eziphila unikezwa eqinile, yini lithathelwe yayo imvelo oluthile khona nokukhiqizwa inzalo agcwele. Izingxenye ngamunye komgwamanda isilwane ezilotshwe ebuhlotsheni nomunye, ngomqondo ovulekile ukhombise isixhumanisi okungenakuphikiswa phakathi ukukhiqiza uhlobo oluthile nengaphandle layo.
Ukuvela izilwane kuye kwaholela yokuthi kungezona zonke izingxenye zomzimba zabo kuhlobene, abe kunomthelela oqonde ngqo umkhiqizo zohlobo. Thina akhethiwe zezinhlobo engcono, futhi ithuluzi esikhulu salokhu Ukukhetha kwaba ingaphandle. Wabanikeza? Ubuningi zilwane, ezikhambisana kuhle ngokuzeleko nesidingo ukubeka phambi kwabo indoda.
Izindlela zokuhlola Ingaphandle
Izindlela ekuhloleni ingaphandle isilwane athuthukile kudala futhi ngcono ngokuhamba kwesikhathi. Kunezinhlobo ezintathu kuphela. Eyokuqala - ezibukwayo - kusekelwe olwazini omuhle izingxenye komzimba wesilwane futhi okungu ezilinganiselwe. Okwesibili - kumba. Le ndlela yenza kube lula ukuhlola izingxenye ngabanye le nqaba, ukuthuthukiswa yabo, kuhambisana namazinga adingekayo. Neyesithathu - yokukala umzimba isilwane, owakhiwa izilinganiso e wonke umzimba futhi izingxenye zalo.
Mayelana ingaphandle izinja
inja Ingaphandle siqukethe amabili izigaba - jikelele kanye nalezo ezizimele. Owokuqala uqukethe ulwazi mayelana ifomu sangaphandle inja, umthetho-sisekelo walo, isakhiwo, kanye nokuthuthukiswa avumelanayo izingxenye ngabanye. Liphinde uthi bonke kwezinso isici kanye zamehlo. A Ingaphandle yangasese - kuyini? Izici nobuntu izinhlobo ezithile, esingokwemvelo noma atypical yalezi zici, okuyinto kuchazwa ngu kwezinkambiso iqine.
Ngokuvamile indlela ezibukwayo asetshenziswe inja, isetshenziswa kanye izilinganiso elula yebhayomethrikhi. Kuhlola ingaphandle ukukhiqiza emibukisweni ahlukahlukene, yamathanga kanye broods. Ngezinye kwalezi zenzakalo, kukhona Ukukhetha zezinhlobo kangcono zizalela eminye kanye ngcono zohlobo, ngokuhambisana nezidingo ekwakhiweni kwamazinga, imithethonqubo futhi tolerances.
Izinja ezisetshenziswa izinjongo ezifana, Ziningi ezifuze ukubukeka, kodwa futhi inemithwalo umehluko isakhiwo izingxenye ngazinye emzimbeni. abesilisa yangaphandle nabesifazane ihlukile - ezicutshini ngomusa esihluke lokuqala elikhanyayo kusuka esithuthuke kabanzana imisipha yesibili.
Komqondo nezinga lokukhula kwengane inja kuthinte ukubukeka ngenxa yezinguquko ezihlobene nokukhula. Ngakho-ke, nokuhlola zangaphandle imisebenzi eshiwo ngaphezulu njalo kwenziwe ikhumbula umehluko ubulili namaqembu yobudala abahlanganyeli.
Nasi amahhashi Ingaphandle
Lesi silwane, nehhashi esetshenziswa indoda ngoba etinhlosweni nezinhloso, kufanele ibe netimfanelo futhi izici ezinomthelela ukusetshenziswa ngokuphelele imisebenzi ngaphandle kokuyekethisa impilo futhi ngokuphila kwesilwane. Emakhulwini eminyaka zokuzalanisa amahhashi kuye kwaholela yokuthi athuthukile izimpawu ezicacile ibhalansi ilungelo ifomu bese ukusebenza komzimba. Ngakho-ke, ukukhetha efanele zohlobo, yakhelwe ukwenza imisebenzi ethize, kunqunywa izici ekwakhekeni nasekumeni komzimba wesilwane kusiza ukuhlola ngokunembile ingaphandle ihhashi.
ukuhlolwa Visual iqala sokunquma usayizi umzimba. Ukuze wenze lokhu, kumele buyela isilwane i isikwele ngengqondo lapho onqenqemeni engenhla umugqa kusukela buyabuna eduze croup, futhi imingcele lateral babe tangent ehlombe and buttock ngokulandelana. Ngokuvundlile isikwele side sikhombisa ihhashi ukuthi angaya kokubili ngaphansi sehhashi e amahanisi. Uma virtual isikwele eduze isikwele, noma, ngaphezu kwalokho, enwetshiwe thwi, khona-ke isilwane isebenza kuphela ngaphansi sehhashi.
Khona-ke udinga ukuhlola ingxenye yomzimba, iveza isithombe egcwele yalezi Ingaphandle isilwane ngokuvumela ukusungula ukuxhumana phakathi amakhono ayo futhi senzelwe umsebenzi, okuyiwona empeleni, owakhethwa.
Isihluthulelo ukulondolozwa ngempumelelo ubumsulwa zohlobo
Ukulawula izilwane zasendle kuhlehlela emuva ezikhathini Mesolithic. Abantu njalo wahlanganyela ukukhethwa kwezilwane ezifuywayo, ukubabona kulezi noma nezinye izimfanelo esiwusizo ngokukhethekile umphakathi. Ngenxa yalokho, kuba Ingaphandle isibe omunye amathuluzi main, okuvumela hhayi kuphela balondoloze izinga wayefisa abantu, kodwa futhi ngcono kubo ngoba zohlobo ngalunye.
Welsh Corgi Cardigan futhi Pembroke: umehluko kanye ukuqhathanisa, uhlamvu amaqiniso athakazelisayo
Kuqondiswe ngu Bulat Yusupov: Biography, amabhayisikobho, empilweni yakho